एसियाड र नेपाल – Rajdhani Daily
एसियाड र नेपाल
नेपालले १९५१ मा नयाँ दिल्लीमा भएको एसियाली खेलकुददेखि नै सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नस् १९५४ र १९६२ बाहेकका सबै एसियाडमा नेपालले सहभागिता जनाए पनि एसियाड सुरु भएको ३५ वर्षपछि मात्र नेपालले पदक जितेको थियो ।
सन् १९८६ मा नेपालले पहिलोपटक बक्सिङ र तेक्वान्दोबाट एकैपटक ८ वटा कांस्य पदक जितेको थियो । नेपालले एउटै एसियाडमा अहिलेसम्म यति धेरै पदक जितेको छैन ।
यतिबेला बक्सिङ र तेक्वान्दोमा नेपालले पदक जित्दा ती खेललाई एसियाडमा पहिलोपटक समावेश गरिएको थियो । यसैगरी, यसपटक पनि इन्डोनेसियाको जकार्ता र पोलम्बुङ एसियाडमा पहिलोपटक समावेश गरिएको प्याराग्लाइडिङको क्रसकन्ट्री पुरुष टिम इभेन्टमा नेपालले रजत पदक जित्यो ।
नेपालले एसियाडको इतिहासमा प्यराग्लाइडिङको पदक समेत जोड्दा अहिलेसम्म २ रजत र २२ कांस्य गरी २४ वटा पदक जितेको छ । यसपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ र जुडोबाट पदकको अपेक्षा गर्दै सन् १९८६ को भन्दा बढी पदक जित्ने दाबी गरेको थियो । तर, एसियाडको बीचैमा राखेपका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले हारको जिम्मेवारी आफूले बोक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिन पुगे ।
नेपाली खेलकुदमा यो पहिलोपटक घटेको घटना भने होइन । कुनै पनि ठूलो प्रतियोगिता आउनासाथ पदकको महŒवकांक्षा र दाबी गर्ने रोग पुरानै हो । दीर्घकालीन नीति, योजना र सम्भावनाको अध्ययनबिना नै हचुवामा नेपाल खेलकुदले लामो यात्रा तय गरेको देखिन्छ ।
प्याराग्लाइडिङका खेलाडीले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि भए पनि नियमित रूपमा अभ्यास अझ भन्नुपर्दा दैनिक कम्तीमा ५ घण्टा अभ्यास गरेका थिए । जसको फल एसियाडमा प्राप्त भएको छ । अन्य खेलमा दुईतीन महिनाको तयारीमा खेलाडीबाट बढी अपेक्षा र खेलाडीलाई दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको देखिन्छ ।
जकार्ता एसियाडमा २९ खेलमा नेपालको सहभागिता रह्यो । एक्पोज, अनुभव र १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीस्वरूप यो एसियाडलाई प्रयोग गरिएको बताइरहँदा पनि पदाधिकारीहरूको कमजोरी बाहिरिरहे । प्रतिस्पर्धा गर्न ट्र्याकमा पुगेकी एथलेटिक्स खेलाडी विश्वरूपा बुढा १० हजार मिटर दौडबाट वञ्चित हुनुप¥यो । नेपाली टोलीका प्रक्षिक अमिर आदल र टिम म्यानेजरका रूपमा शान्ति सिंह एसियाड पुगेका थिए । त्यसैगरी, आठ सय मिटरमा जकार्ता पुगको सोमबहादुर कुमाललाई अन्तिम समयमा चार सय मिटरमा सहभागी गराउने मुख्र्याइँ गरिएको थियो ।
नेपाली खेलाडीले पनि ओलम्पिक र एसियाडलाई सहभागिताका रूपमा मात्र लिएको देखिन्छ । उनीहरूले यसमा चयन हुनुलाई नै महŒवपूर्ण मानिदिन थालेसँगै प्रदर्शनमा कमजोर हुन पुगेको छ । एसियाडमा ओलम्पिकमा पदक जितेकादेखि विश्व रेकर्ड बनाएका खेलाडी हुन्छन् । त्यसैले ठूलो लगानी र मिहिनेत गरेका खेलाडीसँग सबै कुराले पछाडि परेका नेपाली खेलाडीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरिनुहँुदैन । तर पनि नेपालले आफ्नो प्राथमिकताको खेललाई छनोट गर्न नै सकेको छैन । जसका कारण हचुवाका भरमा धेरैभन्दा धेरै खेललाई समावेश गराउने गर्छ ।
नेपाली खेलकुदमा यो पहिलोपटक घटेको घटना भने होइन । कुनै पनि ठूलो प्रतियोगिता आउनासाथ पदकको महŒवकांक्षा र दाबी गर्ने रोग पुरानै हो
रजत पदक दिलाउने खेलाडी
१९९८ बैंकक एसियाड ः तेक्वान्दो ५५ केजी तौल
२०१८ जकार्ता एसियाड ः
विमल अधिकारी, विजय गौतम, सुशील गुरुङ, युकेश गुरुङ र विशाल थापा
बक्सिङमा ६ कांस्य सन् १९८६
तेक्वान्दोमा १२ कांस्य– १९८६
मनबहादुर शाही– १९९४
किशोर श्रेष्ठ– १९९८
सपना मल्ल– १९९८
रिति जिमी राई
करातेमा ३ काश्य
१९९४ सिताकुमरा राई
१९९८ सम्बरबहादुर घोले
२०१४ विमला तामाङ
नेपालले रजत पदक जित्न २० वर्ष कुर्नुपरेको छ । त्यो पनि नयाँ खेलका रूपमा समावेश गरिएको प्याराग्लाइडिङबाट सम्भव भएको हो । नियमित लगानी गरिए, देशभरि नै खेलाडी भएका मार्सलआर्टबाट नेपालले किन पदक जित्न सकेन ? यसको लेखाजोखा कहिल्यै पनि गरिएको छैन र अब पनि हुँदैन ।
राखेपमा सदस्य सचिवका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि एसियाड र ओलम्पिकमा सेफ दी मिसनका रूपमा नाम दर्ता गराउनुलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । जसले गर्दा खेलकुदमा नयाँ उचाइ थप्न सकिएको छैन ।
खेलकुद संघभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विवाद समाधानमा खेलकुदको शीर्षस्थ निकाय राखेपको ध्यान जान सक्दैन । यतिबेला पनि १८औं एसियाडमा सहभागी खेलहरू कुस्ती, कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, उसुलगायतका संघमा विवाद देखिएको छ । एउटा खेलको व्यक्तिलाई अर्काे खेलको व्यवस्थापक बनाएर पठाइएको छ । यो परम्परालाई तोड्न नसक्नु यसपटकको एसियाडमा देखिएको अर्काे गल्ती हो ।
त्यसैगरी, नेपाली खेलाडीको तयारी, अभ्यास, एक्पोजरको समेत कमी देखिन्छ । कतिपय खेलमा लामो समयदेखि पुराना खेलाडी भिडिरहेका छन् । जब कि, अन्य देशका युवा खेलाडीले एसियाडमा चमत्कार देखाउन सफल भएका छन् ।
कुनै समय नेपाल मार्सलआर्टमा दक्षिण एसियाको बादशाह थियो तर आज त्यो एकादेशको कथा बनेको छ । यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएकोु खै ? किन नेपाल झन्झन् तल झर्दै छ । ती संघभित्र दाइजो जसरी एउटै व्यक्तिको राज चलेको छ । देशभरि खेलाडी छन् तर ती खेलाडीले छनोटको अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ ।